Hambisa amanqaku ukusuka kwiJografi ukuya kwiBentley Imephu- iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Hambisa iimpawu ukusuka kwiiGographics ukuya kwiBentley Imephu
Geospatial - GISMicrostation-Bentleyegeomates My
Ngethuba elidlulileyo sathetha malunga nokuba kuthetha ukuthini ukuxhuma kwi-Microstation Geographics ukuya Bentley Imephu, sathetha ngendlela zombini sebenza iskimu kunye nezinye izibonelelo ezibalulekileyo zeMephu yeBentley. Sele eposini ndathetha ngendlela enokwenzeka ngayo ukufuduka isakhiwo yeprojekthi, kule ngxaki ndifuna ukuhlafuna indlela yokufuduka kweemephu kunye neempawu ze-Geographics zokubonisa iiklasi ze-xfm.
Nangona, isakhiwo seprojekthi esakhiwe ngeGeographics Legacy singeniswa kwiBentley Imephu, akuthethi ukuba iimpawu ezi zinto ziya kubonwa yiprojekthi entsha, kufuneka zinikezelwe.
Indlela i-Geographics esebenza ngayo
Kwisitayile seJografi izinto ngeMSLINK zazinonxibelelwano kwindawo yogcino lwedatha, yayiyiyo yonke into enayo, ikhonkco lohlobo lwe-OLE. Le MSLINK inxulumene nomzobo osuka kwifayile ye-dgn nge-MAPNAME yetafile ye-MAPS, nange-MSCATALOG ukuchonga apho unokufumana khona idatha Entitynum. Ukongeza, bekukho iitafile eziphindwe kabini zeeprojekthi ezihambelanayo ze-Intergraph ezihlala zithwala i-UG ngaphambili.
Ukongeza, into leyo yayine-FEATURE, nangona oku kwakungeyonto inamandla, xa yayabela ukuba ifumane iipropathi ezichaziweyo zolu phawu (kubandakanya imiyalelo) kwaye yayinxulumene netafile yeCATEGORY. Into inokuba neempawu ezingaphezulu kwesinye kwaye eyona nto iphambili kuye yanikezelwa ngesitayile esichazayo, ukuba i-FEATURE kunye nezinye izinto ezinxulunyaniswe nesiseko zinxulunyaniswa netafile ye-MSCATALOG apho bababelwe khona entitynum leyo yayingumnatha wezinto zonke.
Emva koko ifayili index.dgn nokugcina iimilo zeemephu anxulunyaniswa apha iimephu yafumana MAPID, yiyo itheyibhile nganye inxulumene Geographics waba amasimi ubuncinane ezimbini: MSLINK (inani qumrhu lomzobo, iyodwa kwimephu ngalinye) apho usoloko iqhosha kunye MAPID ( yiphi imephu igcinwe, ihlukile kwikhathalogu yebalazwe) eyona nto ikhiye yangaphandle kwitafile ye MAPS.
Ngoko ke kuphela indlela yokusebenzisana nedatha kwakufuneka ixhumeke kwisiseko, kwaye imisebenzi yayo yenziwe yerhamncwa njengokuhlaziya iitafile ezinolwazi malunga nento efana nendawo, umjikelezo kunye nolungelelwaniso ukuze uMshicileli azi ukuba angayibonisa njani. Unokukhupha kwakhona iilebhile eziwa njengezinto ezivela kwiziko ledatha kunye nekhonkco efanayo lezinto ezixhunyiwe.
Kubonakala kubulula kodwa kwandibiza ihlabathi ukuba ndiyiqonde kwi-MGE, kwaye into edabukisayo kukuba yonke umsi ayinceda kakhulu iphrojekthi nge-Bentley Imephu.
Indlela iBentley Imephu isebenza ngayo
Iprojekthi yeBentley Imephu igcina ingcamango efanayo yeCandelo, impawu, imephu, into; kodwa kule meko, ngokufaka ifom ye-OLE yedatha yekhonkco ngeXML eninzi kwinkqubo yenguqu.
Kule meko, into emephini inokugcinwa kwedatha (kwi-dgn efanayo), eqondwa njenge-xml okanye njengoko iBentley wfm iyibiza njalo. Ke iyatshintsha into yokuba ngoku izinto zinokubanophawu olunye, kwaye zinxulunyaniswe ngokommandla yimithetho yezobugcisa; Phambi kokuba umda we-apile ube ngumda omnye kunye nomda wepropathi, ngoku kufuneka babe zizinto ezahlukileyo kodwa ngombutho wezinto ezinokuthi xa uguqulana unjalo.
Ukunxibelelana nedatha kukucofa nje kube kanye, nokuba uqhagamshele kwiprojekthi, ungafunda yonke into eyayishiywe njengedatha xfm. Kwaye emva koko ukuphathwa kwe iilebhile kunye neempawu zepropathi, ngokwenza nje utshintsho kuMlawuli weGeospatial. Ngaphambili, ukwenza utshintsho bekunamandla kuphela kumbono ngoMshicileli, kodwa izinto zazifuna ukuba uphawu lususwe luze lubelwe kwakhona.
Ukongeza iMephu yeBentley ibonelela ngeendlela zokudala iifom zedatha, iinkqubo ezilandelelanayo, imiyalelo ehambelana nayo (iindlela / imisebenzi / imimandla / iikhrayitheriya / iingxelo) kunye nezinye iipirouettes eziququzelela ukwakhiwa kwedatha.
Into engatshintshi kakhulu, kwaye yiloo nto abasebenzisi be-ESRI bathi, ukutshiza obomvu kuthatha ukutshiza nokuyila.
Ngoku, ukufuduka kwesakhiwo seprojekthi kunokwenzeka, koko wongeza imisebenzi ngokuMlawuli weGeospatial, oya kukulungele ukuqhubeka nokutya idatha kodwa ingxaki:
Kwaye iimephu zakhiwe ngeGographics?
Kuba le Bentley ayizange idale i-artifact evumela ukuguqula izinto kwiProjekthi yeLifa kwi-xfm ... Yeka fuck!
Isiphakamiso sokuba ndiza kubonisa ukuba oko ndiyibona njengento enokwenzeka, emva kokuba ndixoxe nomhlobo ondiqhagamshelane naye esuka eChile, emva kwee-imeyile ezininzi esizifikile kwiGeofumada endala kodwa esebenzayo.
Isinyathelo 1. Ukuthumela ngaphandle ukuyila ifayile
Kusuka kwiprojekthi ye Geographics, evulekile, ukhetho lokuthumela iimpawu zokufometha iifayile ezikhethiweyo (ifayile / ukuthumela ngaphandle / SHP). Oku kufuneka kwenziwe kumntu ngamnye uphawu ekhoyo kwimephu.
Kuya kuba yimfuneko ukulwa ncinane xa izinto ziyi-centroid / umda, kuba kuya kufuneka ukuba zidluliselwe kwiimpawu ngokuzidlulisela ikhonkco.
Kwakhona ukuthumela ngaphandle kungenziwa kwi-Mapinfo, ngokukhetha kwakho.
Isinyathelo 2. Ukungenisa kwi-Bentley Imephu
Kwaye ngoku, ukusuka kwi-Bentley Map Project, sakhetha ukhetho lokungenisa (Ifayile / ukungenisa / iintlobo zeenkcukacha ze-GIS), kunye nale festile ibonakala Ukungasebenzi, iqhosha lase mouse liyenziwa ku ngeniswa kwaye ikhethiwe ukungenisa entsha.
Ngeqhosha lasekunene le mouse kwi-Imoport1 ukhetha ifayile okanye isikhombisi esipheleleyo. Kuyenzeka ungenise ngaphakathi ifomathi ifayilet Iifayile zefayile zeMapinfo kunye nethebhu.
Ngokuchaphazela iklasi Sinokubona ukuba kunokwenzeka ukukhetha umgangatho, umbala, ukucaca kunye nezinye iipropati.
Ukubanika yona uphawu oko kusithandayo kusanele ukwabela uluhlu (inqanaba).
Njengoko uMemnn watsho kuloo ndawo yokudala yaseMexico:
Oku kufuneka kwenziwe kwimiba nganye kwimephu nganye kwiqela ngalinye kwiprojekthi nganye.
Kuba oku kunokwenzeka ukuyigcina yokungenisa, ke ibizwa ngokuba yifayile kwifayile okanye kulawulo. Inyani yile yokuba kukho umsebenzi onzima wokuguqula idatha, ngakumbi ukuba ikwiifayile ezahlukeneyo. Ayizukulimaza, sebenzela i-vba kwi .NET ye-aut
Tsiba inkqubo endaweni yokwenza lo msebenzi ngeenyawo, oku kunokukhokelela ekuzibulaleni ngaphezu kwesinye ngosuku. Eyona ngxaki iphambili kukuba ukwenza ukutsiba siqhubeke ukuxhomekeka kubuchule obukhethekileyo (kunye nokutshaya kakhulu) ukuqonda amathumbu eBentley Imephu kunye neJografi, kunokwenzeka, kodwa usetyenziso akufuneki lube yi-astral (masijongane nayo, bobabini) kubasebenzisi abaqhelekileyo.
Okubuhlungu ngakumbi, ukuba ulwazi lugcinwe kwi-DNA yasekuqaleni kwimbali... ifayile entsha ayiyi kuba nembali.
Isisombululo endisibonisayo sinokusebenza ukuba unedatha encinci, okanye ukuba ibigcinwe kwikhatriji yendawo, ke isiphelo esibuhlungu kukuba ukufuduka kwiJografi ukuya kwiBentley Imephu akukho lula kangako, ngenxa yenguqu yedatha. Ukuba uMlawuli weGeospatial, njengoko watshoyo ngaphambili, unjalo isifo sezinyo, ukufuduka kwedatha kunokuba buhlungu ngakumbi ngaphandle kokuba uBentley ucinge ngezisombululo kubasebenzisi balo abangafuni ukuhamba ukusuka ngolunye usuku ukuya kwesinye.
Ukuthetha nabahlobo ababendizenzele ukuba bangifumene nesilumkiso, kodwa ukususela namhlanje lusuku oluthandekayo kwihotele ye-seedy kwaye ukuthelekiswa kunjalo, ngenvume yakho ndiya kuyisebenzisa:
"Akufani nokutshintshana ...
... kungathi kufana nokulahlekelwa ubuntombi bakho "
Iiveki ezi-2 zokusebenzisana kwemephu yaseLatin American